I-Asus ROG Strix G531, ilaptop yabona badlali, siyayihlalutya | Iindaba zeGajethi
UMiguel Hernandez | | ngokubanzi, Iikhompyuter, Iilaptop, Reviews
Siyazi ukuba uninzi lweepistist alucingi ngokudlala "ilaptop", nangona kunjalo, le mveliso iya inyuka ngokunyuka ngenxa yeemfuno kunye nokuhamba kunye nomgangatho owandayo wezinto ezenziwa ziifemu ezifana neAlienware kunye neASUS kwezi zigxekwa kakhulu amaqela kwixesha elidlulileyo. I-ASUS ifuna ukwenza izinto zibe nzima kwabo bagxeka ezi mveliso. Kwintsebenziswano yethu yamva nje ne-ASUS ezandleni zethu i-ROG Strix G531, ilaptop ye-gamer ebulela kwiimpawu zayo ezijolise ekutsaleni uninzi lwabalandeli. Ukuba ufuna ukwazi ukuba uzikhusela njani kwaye zeziphi ezona mpawu ziphambili, hlala uhlalutyo lwethu ngokungabhali myalezo.
Njengamaxesha amaninzi, sigqibe kwelokuba silupheleke olu hlalutyo nevidiyo eya kusinceda sibone ukuba isebenza njani le laptop ye-gamer kwaye izikhusele kuzo zonke iinkalo zayo, Kungenxa yoko le nto sikumema ukuba ubukele ividiyo esebenza njengesihloko solu hlalutyo kwaye uthathe ithuba ngenguqulo ebhaliweyo yeenkcukacha ezixoxwe kuyo. Ukongeza, kwibhokisi yezimvo zevidiyo yethu ye-YouTube siza kuyiphendula yonke imibuzo yakho malunga nemveliso, sikwazi ukukhulisa uluntu lweGadgetidad ene-Like kunye nokwabelana ngevidiyo. Ukuba unomdla, Ungayithenga kwii-euro ezili-1.199 kule khonkco ukuya eAmazon apho uya kuba nokuhambisa simahla kunye newaranti yeminyaka emibini (LINK).
Into yokuqala esiza kuyenza kukujonga ubuchwephesha beelaptop, Ngeli xesha i-ASUS isinike imodeli enesizukulwane sesithoba i-Intel Core i7, imifanekiso ye-NVIDIA GeForce GTX 1660Ti kunye ne-16 GB ye-RAM phakathi kwezinye izinto ezongeziweyo, ke siza kugxila kwimodeli ethile ehlaziyiweyo.
1 Iinkcazo zobugcisa
2 Isoftware kunye nezixa ezikhulu zezibane
3 Isikrini esikhulu kunye nokunxibelelana okuhle
4 Uyilo olungqongqo kunye neempawu ezibonakalayo
I-Asus ROG Strix G531 iinkcukacha zobugcisa
Umzekelo I-ROG Strix G531
Isikrini I-17.3-intshi ye-IPS epheleleyo ye-IPS (Ultra-Wide)
Inkqubo Intel i7 9750H okanye i5 9300H
GPU I-NVIDIA GeForce GTX 1660Ti
Ukugcinwa kwangaphakathi I-1TB SSD
Izithethi I-Stereo 2.0 ye-4W nganye kunye ne-subwoofer engacacanga
Unxibelelwano I-1x i-USB-C 3.2 - 3x i-USB-A 3.1 - 1x i-HDMI - i-RJ45-iJack 3.5mm
Conectividad 2x 802.11a / b / g / n / ac WiFi - iBluetooth 5.0
Ezinye izinto Inkqubo ye-Quad ye-LED
Ibhetri Malunga neeyure ezi-5
Ubukhulu 399 x 293 x 26
U bunzima 2.85 Kg
Isoftware kunye nezixa ezikhulu zezibane
Siqala ngenqaku lokuba i-ASUS ifuna ukuqaqambisa mhlawumbi ngaphezulu kwezinye, Inomlandeli ophindwe kabini, ngeli xesha ligxile ngaphakathi kwaye ineeheinkinks ezimbini ngasemva nangaphandle. Ezi fan zihlengahlengiswa ngokuthe ngqo ngokweemfuno zethu ngeqhosha elinikezelweyo kwikhibhodi, ihlala isivumela ukuba sikhethe phakathi: Cwaka, umgangatho kunye neturbo. Umahluko mkhulu phakathi kweendlela kunye nendlela ethe cwaka iyaxatyiswa. Kuyacaca ukuba imo yeTurbo ivelisa umoya ongenisa umoya, nangona kunjalo, nje ukuba sifune ngaphezulu kwikhompyuter, iya kulawula ngokuzenzekelayo amandla kunye nokusebenza kwabalandeli ngokufanelekileyo.
Sikwanayo ne "Aura", isoftware edityaniswa ngu-Asus kwilaptop kwaye eneqhosha layo elizinikeleyo Apho siya kuba nakho ukuvelisa iiprofayili ezithile zokusebenza kodwa apho inkqubo yolawulo lwezibane ze-LED ibalasele ngaphezu kwazo zonke izinto, Asinazo ii-LEDs phantsi kwezitshixo kuphela, kodwa sinezinto ezine zokukhanyisa kuwo onke amacala elaptop ezenza ukuba zibonakale ngathi ziidisco zokuhamba, Kodwa elona lincinci le «gamer» lokusingqongileyo liyaphambana ngayo, nam kancinci, andizukuyikhanyela.
Isikrini esikhulu kunye nokunxibelelana okuhle
Xa sinesixhobo esinezi mpawu, esinobungakanani obukhulu kunye nobunzima, mhlawumbi kungcono ukhethe ubungakanani bescreen esikhudlwana, ukufumana ulwazelelo ngokuthwala kule migaqo akukho ngqiqweni. Kungenxa yoko le nto inguqulelo esiyivavanyileyo inayo 17,3 intshi iphaneli ebanzi, Ngale ndlela, inyusa ipaneli ye-IPS LCD enikezela ngereyithi yokuhlaziya ye-144Hz kunye neempendulo ze-3ms nge-100% yoluhlu lwe-sRGB kunye nesisombululo esipheleleyo se-HD. Ukusonjululwa okungaphezulu kunokuba kulindelwe, kodwa ngokuqinisekileyo bekuya kububeka esichengeni ubushushu kunye nokusebenza kwesixhobo, ukongeza, kwii-intshi ze-17,3 esinokuhlala ngazo ne-HD epheleleyo. Nangona kunjalo, umbono we-HDR kunye neDolby awukhankanywanga, khange sikwazi ukuyiqhuba ke siyaqonda ukuba ayinalo eli nqaku linomdla kwimidlalo ethile yevidiyo. Kuya kufuneka sigqamise apha ezo ziya kukwenza uthandabuze ukuba zivela ngqo kwiLaptop.
I-3x i-USB A 3.2
I-3.5mm combo jack (yemakrofoni)
Ngokunxibelelana, sisebenzisa isiseko esifanelekileyo, akukho kunqongophala konxibelelwano kwaye bahlulwe ngokuchanekileyo phakathi ngasemva nangasekhohlo, ukubonelela ngokufikelela kakuhle ukuvumela uqhagamshelo ngqo kwi-Ethernet nakwi-HDMI oko kusikhumbuza kwakhona ukuba nokuba ilaptop, ayenzelwanga ukuba isuswe kakhulu. Ngokumalunga nokunxibelelana ngaphandle kwamacingo sine I-WiFi ezimbini ezihambelana ne-2,4 GHz kunye ne-5 GHz band ekuvavanyweni kwethu inike ukusebenza ngokugqwesileyo, kunye neBluetooth 5.0, Akukho nto siyiphosayo, ngokunyanisekileyo.
Uyilo olungqongqo kunye neempawu ezibonakalayo
Senziwe ngeplastikhi emnyama, sishiya konke ukukhanya kulapha ezantsi. Ihlale kamnandi, inebhodi yezitshixo enamanani kwaye izitshixo ze-WASD ziyahamba, Umdlali oqhwanyazayo. Ngokwenxalenye yethu sinendawo efanelekileyo yokubeka iingalo, mhlawumbi singathi umkhondo wokulandelela umncinci nokuba mncinci kuwo. Sinee-360 x 275 x 26 iimilimitha ubunzima bebonke obungaphantsi kwe-2,85 kilograms, Njengoko besesitshilo, ayisiyiyo eyona nto iphathekayo oya kuyibona.
Ndiyithandile le laptop ukuba isoftware ihamba kunye nokusebenza kwayo kwaye ayisiyonto eyongezelelekileyo njengoko kwenzekile kolunye uphawu esiluvavanyayo. Kodwa ngaphezu kwako konke, into yokuba inika kanye le nto ithembisayo yeyona inomdla. Nangona kunjalo, ndiye ndafumana amanye amanqaku amabi, eyona nto ibaluleke kakhulu yitrackpad, exhaphake njenge-ASUS incinci, ayicacanga kwaye inamaqhosha amabini anendlela engachanekanga. Oku kuthelekiswa nokuhamba ngokuchanekileyo kwamaqhosha kunye namanye amaqhosha ekhompyuter.
Ungayifumana kwi-1.199 euro ngokuthe ngqo kwiAmazon,Nangona unoluhlu olubanzi lokwenza ngokwezifiso ukwenza oko ukuthanda kwakho, ngenxa yoko unokutyelela iphepha iwebhusayithi eyabelwe i-ASUS kwimveliso.
Izinketho ezinkulu zokwenza ngokwezifiso kunye nokusebenza kwe-chord
Inkqubo yokukhanyisa enomdla kunye nesoftware ezinikeleyo
Isandi esinamandla kunye nomboniso osebenzayo
Ngaphandle kolawulo olwenziwayo, abalandeli bayakhwaza
Uluhlu lweemveliso lubanzi kwaye lonakele
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I-Asus ROG Strix G531, ilaptop yabona badlali, siyayihlalutya